musha nyika dzakabatana Politicians Andrew Cuomo Mwana Wevadiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Andrew Cuomo Biography inoratidza Chokwadi paChidiki cheKecheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mararamiro, Mukadzi, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega. Iyi inyaya yezviitiko zvinoyemurika kubva paakange ari mudiki kusvika paakatanga kuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaAndrew Cuomo. Credits: IG uye CNN.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye izwi rakakurumbira remaDemocrats mukurwira corona-virus inozivikanwawo seCOPVID-19.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Andrew Cuomo's biography yatakagadzirira uye inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Andrew Cuomo Yemwana Nhau:
Andrew Mark Cuomo akazvarwa pazuva re6th raDecember 1957 muQueens mudunhu reNew York City. "Lov Gov" sezita raakatumidzwa zita ndiye mukuru pavana 5 akazvarwa kuna amai vake Matilda, uye baba Mario Cuomo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika yekuAmerica - uyo wedzinza reItari neCampanian neSilician midzi yemhuri - akakurira kuQueens pamwe nevanun'una vake vana. Ivo vanosanganisira Madeline, Margaret, Maria, naChris.
Andrew Cuomo akakurira kwaakaberekerwa kuQueens, NY- IG uye WorldAtlas.
Kukura muQueens, mudiki Andrew Cuomo aive mwana aidzidza uyo akashandisa yakawanda yehudiki hwake achinzwisisa mutemo uye zvematongerwo enyika zvaireva kuburikidza nekukurukurirana kwakawanda nababa vake -Mario.
Andrew Cuomo Mhuri Yacho:
Baba vaAndrew Cuomo, Mario aive gweta akatanga basa rakavimbika rekuvaka mune zvematongerwo enyika munguva yekupera kwema1960.
Kare kumashure, aive mumiririri anomiririra muridzi wemba imo mu Empire State. Kuva nababa-vane-zvakanaka zvinoreva kubva kumhuri yakapfuma yemhuri.
Kunyangwe Andrew Cuomo aive asina kana gumi panguva iyoyo, anga akura zvekukwanisa kuronga nzira dzakatsikwa naMario mukukwira kwake kwezvematongerwo enyika.
Mukomana mudiki akapupurirawo kuti amai vake Matilda vakaita sei zvishoma pakutsigira zvishuwo zvababa vake. Pano panouya pikicha yakanaka yevabereki vaAndrew Cuomo.
Sangana nevabereki vaAndrew Cuomo. Image Chikwereti: Instagram.
Dzidzo yaAndrew Cuomo:
Zvaingova zvechisikirwo kuna Andrew Cuomo- mukuteedzera kwababa vake - kushuvira kutsvaga zvido mune zvematongerwo enyika nemutemo.
Akachengetedza zvishuwo zviri zvipenyu achiri kudzidza kuSt Gerard Majella uye kuna Archbishop Molloy High Chikoro mu Empire State.
Gavhuna wepamberi akaenderera mberi nekuunza zvishuwo zvake danho riri pedyo nekubudirira nekuwana BA mumutemo kubva kuFordham University pamwe nekurapa JD kubva kuAlbany Law School mugore ra1982.
Basa raAndrew Cuomo Pakutanga:
Panguva iyo Gavhuna weRudo aipedzisa zvidzidzo zvake pachikoro chemutemo, baba vake vaive vototanga kuita chinzvimbo chegavhuna weNY.
Hapana kana mumwe chete anoshaya musangano wezvematongerwo enyika akakosha, gavhuna wenguva yemberi akazova maneja wemushandirapamwe wababa vake achangopedza chikoro cheMutemo.
Unogona kumuona achironga pamwe nedzimwe nhengo dzedare rebaba vake? - Instagram.
Mario paakazopika muhofisi sagavhuna, Andrew akaitwa mumwe wevanopa mazano pababa vake. Akaenderera mberi achishanda kukambani yemagweta - Blutrich, Falcone & Miller.
Nekudaro, Andrew akakurumidza kurega kutsigira chinhanho chekutanga - Housing Enterprise Yevasina Rukudzo (RUBATSIRO) - iyo yaakatangisa mu1986.
Andrew Cuomo Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kutenda kuda kwaAndrew kwekusimudzira kuve muridzi weImba kunyanya kune vasina rombo rakanaka, akaitwa sachigaro weNew York City's Homeless Commission.
Akasimukira pachinzvimbo cheMunyori weUnited States Dhipatimendi rezeedzero pamwe nekuvandudza maguta (HUD) pasi pehutungamiriri hwaMutungamiri Bill Clinton.
Mufananidzo wake wepamutemo semunyori wedhipatimendi reUnited States Dzimba Dzedzimba uye Urban Development - CNN.
Mushure mekuita matanho akakura neHUD, Andrew akashinga mukutenda kuti akange ave nemukurumbira zvakakwana zvekupa mukana pachinzvimbo chegavhuna weNew York panguva yesarudzo dza2002.
Nehurombo, akabva mumujaho nekuti kutaura kwake kusinga tsanangurike nezve mumwe anokwikwidza naye George Pataki hakuna kuenda zvakanaka nevanotarisira kuvhota.
Andrew Cuomo Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Makore mushure mekusiya mujaho we gubernatorial wa2002, Andrew akazivisa chinangwa chake chekuva gurukota rinowona nezveNew York State muna 2006 uye akakunda musarudzo dzakanangana nereRepublican, Jeanine Pirro.
Panguva iyo Andrew aive pazviri, aifarirwa pasarudzo inogona kuve yeUS Senate mu2010 asi akafunga nezvekuva gavhuna weNew York.
Akazohwina 2010 gubernatorial sarudzo nekukunda Republican Carl Paladino.
Akapika sagavhuna weNew York muna Zvita 2010. Image Chikwereti: NewYorkTimes.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Andrew Cuomo's biography, iye zvino ari wechitatu-temu gavhuna.
Zvakare, akawana nyasha mumaziso emaDemocrat nemaRepublicans zvakafanana nekupindura kwake nekukasira pakupararira kwedenda reCoronavirus iro rinozivikanwawo seCCVID-19 muNew York.
Cuomo anotungamira mhinduro kurwisa hutachiona nekutungamira matanho anoshanda uye kuitisa mishumo yakamuona achiva izwi rakakurumbira remaDemocrats pakurwisa denda iri. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Hupenyu Hukama hwaAndrew Cuomo Hupenyu - Musikana, Wife, uye Vana:
Kure nekuremerwa kwebasa rake sagavhuna we 'guta risingatomborara,' Andrew anga aine hupenyu husina kugadzikana hwerudo.
Aive murume wekutanga kumusikana wake cum mukadzi - Kerry Kennedy. Vakasangana pamberi pa1990 ndokuenderera mberi nekusunga pfumo pa9th yaJune 1990.
Andrew naKerry vanga vari murume nemukadzi kwemakore gumi nematatu chete. Ivo vaive nevanasikana vatatu pamwechete vasati vaenda nenzira dzakasiyana mu13.
Vanasikana vacho vanosanganisira Mapatya Cara Ethel Kennedy-Cuomo naMariah Matilda Kennedy-Cuomo (akazvarwa muna 1995), naMichaela Andrea Kennedy-Cuomo (akazvarwa muna 1997).
Andrew Cuomo naKerry Kennedy vakave nemuchato wemakore gumi nematatu vasati vatsemuka. Kwayaka: NewYorkTimes.
Achienderera mberi kubva pakurambana kwake, Andrew akatanga kufambidzana naSandra Lee. Vakasangana mu2005, makore maviri chete mushure mekuparadzana kwaAndrew nemukadzi wake wekare Kerry. Sandra akatanga kugara naAndrew uye aive musikana wake kwemakore gumi nemana.
Munguva iyi, Akabatsira kusimudza vanasikana vaAndrew senge vaive vana vake uye akafara naAndrew kudzamara vaparadzaniswa murunyararo mu2019.
Andrew anga asina kuroora kubvira paakarambana kwekupedzisira. Maitiro atinozvifunga, zvinotora kanguva asati atanga kutsvaga musikana mutsva sezvo denda rekonavirus ramuita akabatikana zvakanyanya kupfuura nakare kose.
Andrew Cuomo aine wake waaimbove musikana wake Sandra Lee uye vanasikana vatatu vakamuberekera kubva paakaroora. Chikwereti: Vanhu.
Andrew Cuomo Hupenyu Hwemhuri:
Ndiani Andrew Cuomo asina mhuri uye chii chingadai chakave kwaari dai asina kuzvarwa nevabereki vake vanoshanda?
Gara kumashure apo isu tichikuunzira chokwadi nezve nhengo dzehupenyu hwemhuri yaAndrew Cuomo kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaAndrew Cuomo:
Baba vaAndrew Cuomo - Mario Cuomo aive gweta cum wezvematongerwo enyika. Iye wedzinza reItaly uye akazvarwa muna Chikumi 15, 1932. Mario akawana kugadzwa kwake kukuru kwezvematongerwo enyika seNew York Secretary of State muna 1974.
Akaenderera mberi kuva Gavhuna weNew York kwematemu matatu asati arasa mukana wake kwetemu yechina.
Kusvikira kufa kwaMario pa1nd yaNdira 2015, aive nehukama hwepedyo nenhengo yega yega yemhuri yake kusanganisira Andrew uyo anomupa mbiri yekuva shamwari yake yepamwoyo, shamwari, uye chipangamazano.
Andrew Cuomo nababa vake uyo anowedzera kaviri semuperekedzi wake, shamwari uye shamwari. Attribute: CNN.
Nezve Amai vaAndrew Cuomo:
Amai vaAndrew ndiMatilda Raffa. Iyewo anobva kuItari uye akazvarwa munaGunyana 16, 1931.
Matilda pakutanga akashanda semudzidzisi mumakore ekutanga emuchato wake nemurume wake mushakabvu Mario. Akazorega kupa murume wake mushakabvu rutsigiro mune zvematongerwo enyika, kunyanya pachinzvimbo chake saMukadzi wekutanga.
Waizviziva here kuti Andrew anoda uye anokoshesa amai vake zvekuti ane mutemo kuzita rake? Mutemo "Mutemo waMatilda" unodzivirira kurwisa coronavirus kune vanhu vanopfuura makore makumi manomwe muNew York.
Andrew Cuomo aine nguva yakanaka naamai vake Matilda.
Nezve hama dzaAndrew Cuomo:
"Rudo Gov" ndiye mukuru pane vese vana ve5 akazvarwa kuvabereki vake. Vanun'una vake vanosanganisira Margaret (radiologist ane mukurumbira), Maria (mugadziri wefirimu) Madeline (gweta), naChris (mutori wenhau weTV neCNN).
Vose vanun'una vari pedyo uye vanozvikudza mumwe kune mumwe. Ivo vanoshanda vakabatana ruoko kusimudzira uye kuchengetedza imba huru yezvematongerwo enyika yaCuomo.
Mufananidzo wokukanda Andrew waCuomo nenhengo dzemhuri yake yepedyo: Vogue.
Pano tinotaura nezvezvizvarwa zvaAndrew Cuomo uye hwakawedzera hupenyu hwemhuri. Sekuru nasekuru vake vaive Andrea Cuomo naImmaculata Giordano.
Padivi rerutivi, sekuru vaamai vaAndrew naambuya vake vaive Charles Raffa naMary Gitto.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vezvematongerwo enyika, babamunini, uye babamunini. Kana vazukuru vaAndrew nevana babamunini havazivikanwe panguva yekunyora iyi bio.
Andrew Cuomo Hupenyu hweMunhu:
Ngatifambei tichienda kune izvo zvinoita Andrew Cuomo tikike uye nehunhu hwehunhu hwake kupfuura zvematongerwo enyika. Wanga uchiziva here kuti chiratidzo chake chezodhiac ndiSagittarius? ari kuteedzera nzira, kufunga, kugona, uye kushanda.
Tarira mumwe wemagavhuna eAmerica asina kumbopererwa nemazano. Chikwereti: CNN.
Uye zvakare, Andrew haana kana matambudziko nekuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Zvinodiwa nevezvematongerwo enyika uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuverenga, kugadzirisa mota dzekare dzemhasuru, uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Andrew Cuomo Mararamiro:
Andrew ane mambure akakosha anodarika $ 5 mamirioni panguva yekunyora iyi bio. Kuwanda kwehupfumi hwezvematongerwo enyika kunobva pamihoro uye muhoro waanowana kubva angangoita makumi maviri emakore ekushandira veruzhinji.
Pamusana pehukama hwake hwezvematongerwo enyika nekusimudzira dzimba kune vese, Andrew anokwanisa kugara kuimba inodhura kwazvo muNew York.
Kana iye haamhanyi kunze kwemahofisi uye epamoyo mota ekufamba munzira dzakanaka dzeThe Empire State.
Iye wezvematongerwo enyika asingawanzo anozvibata iye kutasva mabhiza mumotokari dzinodhura. - Instagram.
Andrew Cuomo Chokwadi:
Kuputira yedu Andrew Cuomo yehucheche nyaya uye biography pano pane zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisina chokwadi chokwadi nezvematongerwo enyika.
Vabereki vaAndrew Cuomo vakamurera semuKaturike anoshanda. Kufanana nevaKristu vese vechokwadi, anoti anotenda muna Mwari mumwe wechokwadi uye anotarisira kumuka kwevakafa uye nehupenyu hwenyika ichauya.
Zvinosuruvarisa kuti dzimwe nguva pfungwa dzake hadzifambe zvakanaka nemaKaturike anomuda kunze kwechechi.
Unogona kufungidzira kuti ndeupi mutemo kana mutemo wavasina kufadzwa nazvo. Isu taiti pro-kubvisa nhumbu asi ndizvozvo? Mufananidzo: Fox.
Chokwadi # 2 - Mari:
Waizviziva here kuti Andrew akambowana muhoro wegore rose we $ 1? Akabhadharwa mari yakataurwa yekushanda semumwe weanopa mazano baba vake. Tine zvikonzero zvekutenda kuti baba vaCuomo vaive nedzimwe nzira dzekumuripa.
Chokwadi # 3 - Trivia:
Waizviziva here kuti gore rekuzvarwa raCuomo 1957 raive gore iro Soviet Union satellite Sputnik 2 yakapinda muchadenga nembwa mubhodhi Inozivikanwa saLikaika?.
Zvakare, 1957 raivewo gore iro mafirimu ekare senge “Varume vane hasha ” Uye "Pasi rese muna Mazuva Makore masere”Hit cinema.
Zvimwe zviitiko zvakakosha zvakaita kuti 1957 igore rinonakidza. Bevedzera: Ongorora uye IMDB.
Zita rizere: Andrew Mark Cuomo
Zita rekudanwa: "Rudo Gov"
Bhavhdhe: December 6, 1957
Age: 62 (Kubva paMay 2020)
Vabereki: Mario Cuomo (baba) naMatilda Raffa (amai)
Vanun'una: Margaret (radiologist), Maria (mugadziri wefirimu), Madeline (gweta) naChris (mutori venhau).
CNN Hama: Chris Cuomo
Mukadzi: Kerry Kennedy- (m. 1990; div. 2005)
Vana: Mapatya- Cara Ethel Kennedy-Cuomo naMariah Matilda Kennedy-Cuomo, uye Michaela Andrea Kennedy-Cuomo.
Neices: Carolina Regina Cuomo, Catie Cole naChristina Cuomo Perpignano, Marianna Cuomo naAmanda Cole nezvimwe.
Muzukuru: Mario Cuomo nezvimwe
Vanasekuru Vanasekuru: Charles Raffa naMary Raffa.
Vanasekuru Vanababa: Andrea Cuomo uye Immacolata Cuomo.
Kwaaka Schoo: Fordham University (Koreji) uye Albany Law Chikoro.
kukwirira: 5 ′ 11 ″
Mari kune mubati:
$ $ 280,677 (Akagadziriswa mari inowanikwa).
Net yakakosha: $ 9 Million
Wiki yaAndrew Cuomo
Tinotenda nekuverenga nyaya yedu nekutenda mu "Zvatiri uye zvatinoita“. At Childhood-Biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kuti utibate!